Inqaku leRedmi 8 lisendleleni: sele iqinisekisiwe i-3C | I-Androidsis
Inqaku leRedmi 8 lisendleleni: sele iqinisekisiwe i-3C
Njenge-TENAA, iarhente yaseTshayina i-3C ihlala ithatha ii-smartphones ezininzi ukuziqinisekisa kunye nokubeka uphawu lwazo lokuvuma. Olu luxanduva, phakathi kwezinye izinto, lokudwelisa iinkcukacha zeetshaja zezi, ke zihlala zihluza ulwazi malunga neetekhnoloji zokutshaja ngokukhawuleza kwezi zixhobo zilandelayo eziza kumiliselwa, ezinje nge Redmi Qaphela 8.
Iselfowuni ayisondelanga ukusungulwa okwangoku; ayizukufika ngeentsuku nje ezimbalwa okanye iiveki ezimbalwa. Nangona kunjalo, inyani yokuba kungekudala iza kwenza ubukho kwimarike isondele, kwaye ngokuqinisekileyo yayiza kuboniswa kwiinyanga ezimbalwa ezizayo; mhlawumbi phambi kukaJanuwari 2020, umhla ohambelana nokumiliselwa kwe Redmi Qaphela 7.
Izikhululo ezibini ezitsha zivele kwiqonga le-3C. Omnye wabo unenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza kwe-18-watt, kwaye oku kuthiwa yeyona ilandelayo iRedmi Qaphela 8 ye-smartphone.
Isatifikethi se3C seRedmi Qaphela 8 kunye neRedmi Qaphela 8 Pro
Njenge, Igunya lase-3C lase-China liqinisekisile ukuba ifowuni engaziwayo yeXiaomi ine-M1908C3IE kunye neM1908C3IC eyahlukileyo. Uluhlu luveza ukuba iselfowuni inokuxhotyiswa ngetshaja ye-MDY-09-EK, exhasa kuphela i-5V / 2A (10W) yokutshaja. Oku kungangqinwa ngokufakwa koluhlu oluposwe ngentla kwiziko ledatha lolawulo.
Enye ifowuni ineemodeli ezahlukeneyo M1906G7E kunye neM1906G7T. Isatifikethi sayo se-3C sityhila ukuba singathumela ngetshaja ye-MDY-10-EC exhasa ukutshaja ngokukhawuleza ukuya kuthi ga kwi-18W. Ngokunokwenzeka, le smartphone inokuba yiRedmi Qaphela 8 okanye iRedmi Qaphela iNqaku le-8. Okwangoku, kunokwenzeka ukuba sisixhobo esahluke ngokupheleleyo. Ke ngoko, kuyacetyiswa ukuba ulinde ezinye iingxelo ukuqinisekisa ubungqina obuchanekileyo beM1908C3IE / C kunye neM1906G7E / T ii-smartphones, kodwa umzi-mveliso wamarhe sele ubaphawulile njengee-smartphones.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Inqaku leRedmi 8 lisendleleni: sele iqinisekisiwe i-3C
Le mifanekiso yokwenene iqinisekisa uyilo lweHuawei Mate 30
Umncedisi kaGoogle ukuvumela ukuba wenze izikhumbuzo zabanye abantu